Indlu enomtsalane enegadi yabucala kwintendelezo yakudala, ekwiimitha ezingama-200 ukusuka echibini, kufutshane neziko lembali kunye nazo zonke iinkonzo. Indlu izimele kwaye inamagumbi okulala amabini kunye negumbi lokuhlala elinekhitshi kunye nebhedi yesofa.
Sicoca onke amagumbi kwitshekhi nganye ngoncedo lonyango lotyando:
Isibulali-zintsholongwane esinxilisayo kunye neklorhexidine
UMTHETHO PMC 19422
Isicoci sendalo yonke esinomsebenzi wokubulala iintsholongwane
Le ndlu yindlu endala egcinwe kakuhle kakhulu, inendlu ezimeleyo kwaye ikwimigangatho emibini, umgangatho ophantsi yindawo yokuhlala nekhitshi, ibhedi epholileyo yesofa kunye nokufikelela kwigadi yabucala enomtsalane eneveranda apho unokuphumla khona isidlo sakusasa kunye nesidlo sakusihlwa phakathi kweentyatyambo kwaye singqongwe yindalo. Kumgangatho wesibini kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini ene-air conditioning, kunye negumbi lokulala lesibini elinomnye umbhede ophindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye negumbi loncedo. Ikhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya, lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye liyafumaneka kwiindwendwe, kukwakho nekona elungiselelwe isidlo sakusasa esinomatshini wekofu, isifudumezi samanzi kunye nemicrowave. Uya kufumana ilinen kunye neetawuli onazo.
I-WiFi yasimahla iyafumaneka kwiindwendwe.
Ukuba ufuna ukuyishiya imoto yakho, indlu inendawo yokupaka ekhuselekileyo kwintendelezo yabucala yesakhiwo. Indlu ixhotyiswe ngenkonzo yebhayisekile efumanekayo kwiindwendwe xa iceliwe
Indawo yokuhlala ikwimitha engama-200 ukusuka elunxwemeni lwaseGolide enika ithuba lokuqesha izitulo zaselwandle, iiambrela kunye nezikhephe ezinyovwayo; Iimitha ezimbalwa ukusuka endlwini iqala indlela yebhayisekile oya kuyifumana indawo efana ne-Sirmione kunye nelizwe elingaphesheya kweLake okanye ukuya kumbindi weDesenzano ngemizuzu embalwa...
Ukuba ufuna ukufumana iindawo ezintle ezijikeleze iDesenzano, i-adventure, yothando okanye ukuphumla nje, ungaququzelela uhambo oluhle !!! Ichweba elineenqanawa zenqanawa ukuya eSirmione, iMalcesine, i-Riva exhaled ingaphantsi kwemizuzu eyi-10 ngeenyawo, ngelixa indawo yokumisa ibhasi ukuya kwisixeko esihle saseVerona okanye i-Sirmione i-100 yeemitha ukusuka kwindlu;
Ukuba ufuna ukuthatha uloliwe ukuze ufike ngokukhawuleza eVenice okanye eMilan ungafika kwisikhululo ngemizuzu eyi-15 ngeenyawo okanye usebenzise indawo yokumisa ibhasi kufutshane nendlu.
Siza kukuthumelela i-imeyile ngaphambi kokufika kwakho lonke ulwazi kunye neendlela, ngeenyawo, ngebhayisekile okanye ngemoto, ukukunceda uchithe iholide emnandi !!
36" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
4.87 ·Izimvo eziyi-190
Indlu ipholile kwaye i-architecture, ibekwe kwinkundla enkulu yakudala izimele kwaye izolile kakhulu.
Imalunga neemitha ezingama-200 ukusuka echibini naselunxwemeni, iimitha ezili-100 ukusuka kwivenkile enkulu kunye nevenkile yecuba yebar, iimitha ezili-100 ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi.
1-umzuzu wokuqhuba kunye ne-5 ngebhayisekile ukusuka kumbindi weDesenzano. Kwimizuzu eyi-15 ngeenyawo okanye imizuzu emi-4 ngebhasi, ukusuka kwindawo yokumisa ibhasi kufuphi nendlu, ufika kwisikhululo sikaloliwe.
Ngexesha leeholide uya kusifumana sifumaneke kuyo nayiphi na imfuno okanye ulwazi kwiLake Garda kunye needolophu ezingabamelwane, ezona ndawo zinomdla kakhulu, iindawo zokutyela kunye nezona ndawo zibalaseleyo zokutyelela. Singakuthumelela ulwazi malunga nendawo enomtsalane nge-imeyile ngaphambi kokufika kwakho, ikhona ekhaya kwaye iyafumaneka kuwe yonke imathiriyeli yemifanekiso.
Ngexesha leeholide uya kusifumana sifumaneke kuyo nayiphi na imfuno okanye ulwazi kwiLake Garda kunye needolophu ezingabamelwane, ezona ndawo zinomdla kakhulu, iindawo zokutyela ku…